क्वारेन्टाइन कस्ता बने, कति बसेका छन् ? – sunpani.com
क्वारेन्टाइन कस्ता बने, कति बसेका छन् ?
नेपालगञ्ज – बाँकेका सबै पालिकामा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका, ज्वरो, रुघाखोकी लागेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको छ ।
तर, कतिपय गाउँपालिकाले नाम मात्रको क्वारेन्टाइन बनाएको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत नरेश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लामा कतिपय क्वारेन्टाइन सस्तो लोकप्रियताका लागि बनेका छन् । यसको गुणस्तरबारे अनुगमन र नियमन हुन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । यसको अनुगमन र नियमन भएन भने शंकास्पद रोगीबाट स्वास्थ्यकर्मी र समुदायमा झन् विकराल रुपमा संक्रमण फैलिन सक्छ ।’
खाट र बिस्ताराको व्यवस्थापन गर्दैमा क्वारेन्टाइन हुँदैन । जिल्लामा बनेका क्वारेन्टाइन ‘क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६’ अनुसार छन् कि छैनन् ? कसले हेर्ने ? एक गाउँपालिकामा एउटा बनाउनै पर्ने बाध्यकारी उर्दी जारी गरेपछि कतिपय गाउँपालिकाले अझै बनाइरहेका छन् ।
गाउँपालिका भनेको स्थानीय सिंहदरबार हो । तसर्थ झारा टार्ने होइन कि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाऔं । सरकारले भनेजसरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिलाई १४ दिन त्यहाँ राखौं । जस्तो, हिजो बैजनाथले दुई जनालाई नेपालगञ्ज पठायो । नेपालगञ्जले उनीहरुलाई उतै फिर्ता गरिदियो । आफ्नै ठाउँमा राम्रो क्वारेन्टाइन बनाएर शंकास्पदलाई राख्नु पर्ने दायित्व पालिकाकै हो ।
बाँकेका सबै पालिकाले यस्तो गरेको पाइएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको तथ्यांक अनुसार, अहिले नेपालगञ्जको सामर्थ इन होटलमा १६ जना, द्रब्य होटलमा २६ जना, राधापुरमा ४० जना, क्षेत्रीय तालिम केनद्रमा १५ जना, मानपुरमा एकजना, जय किसान मावि भोजपुरमा ४६ जना र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा एकजना बसेका छन् । जिल्लामा अहिले यी क्वारेन्टाइनमा १ सय ४५ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने अरु गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइन रित्तो छन् ? राप्तीसोनारी, डुडुवामा बैजनाथ, कोहलपुरका क्वारेन्टाइनको तथ्यांक खोइ त ? त्यहाँ विदेशबाट आएका व्यक्ति नभएको त पक्कै होइन होला । यो संकटको बेलामा सबैले आफू बचेर अर्कालाई बचाउने अभियानमा लाग्न जरुरी छ ।